Global Voices teny Malagasy » Ny Fitepon’i Polonina: Lalao Karatra Bingo Ho An’ny Fahasalamana, Fandraràna ny Alikaola, Kisoa Mena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Aogositra 2017 8:08 GMT 1	 · Mpanoratra Jordan & Maria Seidel Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Polonina, Fanabeazana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Tontolo_iainana, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka ny Febroary 2007)
Sary avy amin'i Embe ao amin'ny warsawdaily 
Nandrava ny fepotoana maina ny herinandro manontolo feno orampanàla nitsitaitaika nisintona ny ankizy ivelan'ny trano hilalao kilalaon-dririnina. Ho raharaha fohy izany satria fahadisoam-panantenana ho an'ny sasany ny ririnina raha ampitahaina amin'ny hafanana bebe kokoa ary, toy ny atoron'ny Our Man in Gdansk, azo antoka fa ho lamaody atsy aoriana kely atsy ny kilalao anaty efitrano. Zavatra tiana hatry ny ela ny kilalao toy izany fa miaraka amin'ny fiolankolahan'i Polonina, alaivo ny vola baoritra boriborinao ho an'ny ”Lalao Karatra Bingo ho an'ny Fikolokoloana Fahasalamana .”
Eto aho dia manolotra endrika hafa notapahina sy napetaka amin'ilay endrika bingo natao ho an'ny birao mba hanampiana anao mandritra ny fialantsasatrao rehefa miresaka ora maro mikasika ny antony ilalaovan'ny sampan-draharaha fahasalamana Poloney. Mila misafidy telo fotsiny amin'ireto fanazavana manaraka ireto ny antony ilalaovan'ny sampandraharaha fahasalamana Poloney ianao.
Inona no mitranga rehefa manao drafitra ny manampahefana eo an-toerana, nefa tsy mandoa vola hanaovana lalàna mampifandray an'i Helsinki sy Varsovy? BINGO! Tolotra iray tsy azon'izy ireo lavina sady fahavoazana tsy afaka iverenan-dàlana ho an'ireo ala maro. Fa rehefa tsy ampy intsony ireo vola baoritra boribory, lasa ‘clicktivists’ ny blaogera. Nanao fanangonantsonia i Varpho ary mampirisika ny rehetra mba hanao hetsika amin'izao fotoana izao:
Amin'ny fanaovana sonia ity lisitra eto ambany ity dia toherinao ny fanaovana lalana Via Baltica eny amin'ny faritra natioraly tsy manam-paharoa, toy ny Ala Augustów miaraka amin'ny Lohasahan'ny Renirano Rospuda, Valan-javaboahary Nasionaly Biebrza ary ny Ala Knyszyn, ary amin'ny alalan'izany no anehoanao ny tsy fankasitrahanao ny safidy Białystok ho an'io lalana io.
Sento nanamaivana sy niraisan'ny rehetra  avy amin'ireo blaogera maro anefa no nandraisana ny tolotra iray nolavina raha ny PM Poloney taloha kosa nandà toerana ambony iray  tao amin'ny iray amin'ireo banky lehibe indrindra ao Polonina . Ny mahaliana, nambara tao amin'ny blaogy manokan'ilay mpanao politika taloha ilay fanapahankevitra (tamin'ny teny Poloney). Araka ny Polish Matters, tsy mbola ho tonga atsy ho atsy ny vaovao satria toa diso daholo ara-bakiteny, ilay hevitra manontolo:
Ampy ny itenenana fa i Marcinkiewicz, mpampianatra Fizika tao amin'ny sekoly ambaratonga ambony nialohan'ny nahalasa azy ho praiminisitra Poloney nandritra ny 9 volana tamin'ny taona lasa teo iny, dia tsy nanana traikefa mikasika ny banky na fitantanana.
Kanefa kosa, tsy mitondra any amin'ny fanapahankevitra hendry foana ny traikefa, hoy i beatroot. Tsy vitan'ny miseho ho diso, fa mbola nanome endrika sary ratsy tamin'ny volo, nanapaka hevitra ny hamoaka lalàna mamehy ny alikaola  tao amin'ny iray amin'ireo toerana fizahantany malaza indrindra tao Polonina ny ben'ny tanàna Poloney iray .
Manampo zavatra toy izao avy amin'ireo Britanika ianao, fa hoe Poloney mandrara ny fisotroana? Miketrika hahazo asa any Bruxelles angamba ny ben'ny tanàna ao Sopot?
Tsy misy tokony hampitaintaina an'i Varsovy, omen'i boo ireo blaogy sasantsany mikasika ireo toerana tsy misy fiambenana sy falehan'ny olona amin'ny alina, miaraka amina dokambarotra kaominista, amin'ny anarana mahatehotia hoe Ilay Kisoa Mena. Manontany tena aho, mandroso Red Bull ve ry zareo?
Mijanona eo amin'ny zorom-panabeazana, na dia misy ombilahy kely na fanaingona ara-bakiteny mety hampiditra ny tenany eto, dia manome lahatsoratra sy valinteny momba ny fiainana any Polonina ny The Real Warsaw, avy amin'ny mpianatra iray any Amerika sy mponina tao Polonina taloha. Jereo ity rohin-kevitra ity satria diso tafahoatra loatra ireo hevitra na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany. Nisongadina tamiko: Mividiana trano any Polonina dieny izao!
Izay ary ny fanavaozana ny tontolon'ny blaogy ao Polonina! Ka mandrapihanona ho amin'ny manaraka indray – Do widzenia i powodzenia!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/01/104526/
 Lalao Karatra Bingo ho an'ny Fikolokoloana Fahasalamana: http://www.threemonkeysonline.com/blogs/grodsk/archives/000683.php
 fanangonantsonia : http://varpho.livejournal.com/186942.html
 Sento nanamaivana sy niraisan'ny rehetra: http://polishmatters.blogspot.com/2007/02/kazio-aint-wanna-be-at-pko-bp.html
 nandà toerana ambony iray: http://traveling-life.blogspot.com/2007/02/marcinkiewicz-drops-candidacy-for-bank.html
 lalàna mamehy ny alikaola: http://beatroot.blogspot.com/2007/02/polands-most-moronic-law-of-2007.html
 lahatsoratra sy valinteny momba ny fiainana any Polonina : http://warsaw.warsawshotel.com/node/118